ဟုတ်ကဲ့၊ HomePod သည်စားပွဲကိုမမြုပ်နိုင်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပထမ ဦး ဆုံး third-party base များရှိပြီးဖြစ်သည် ငါက Mac ပါ
အချို့သောထုတ်လုပ်သူများသည် Bitten Apple ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်များအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပြုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုတွေ့သောအခါသိပ်မစောင့်ပါ။ ဤတတိယပါတီ၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်ငွေအမြောက်အမြားရွေ့လျားနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည် သိသာထင်ရှားတဲ့အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်ခွင့်ပြုခြင်း Pad & Quill ကုမ္ပဏီ၏အစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။.
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့စားပွဲပေါ်ရှိအရာများသည်ထူးဆန်းသောဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးရယ်စရာကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ သို့သော် HomePod ၏ကံကောင်းသောပိုင်ရှင်တစ် ဦး ထက်ပိုသောကြောင့်၎င်းအတွက်၎င်းကိုဝယ်ယူလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သေချာစွာပြောနိုင်သည် စားပွဲကိုသူထုတ်လွှတ်သောတုန်ခါမှုများနှင့်ခြစ်ခြင်းမပြုပါနှင့်.
မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၊ အိတ်များ၊ ပြင်ပဘက်ထရီများ၊ ကေဘယ်လ်များ၊ coasters ၏ပုံစံအတွက်ပြုမူလိမ့်မယ် ဒါကြောင့်စပီကာ၏အသုံးပြုသူများစွာဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့စားပွဲပေါ်မှာရွှေ့သို့မဟုတ်ခြစ်ရာမထားဘူး။
ဤကာကွယ်မှုများသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိသောပြtoနာကိုဖြေရှင်းရန်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ဟန်ရှိသည် HomePod ဝဘ်အပိုင်း သောသူတို့သည်ငါတို့သူတို့အားတိုက်ဖျက်နိုင်ပုံကိုရှင်းပြပါ အရောင်တင်ဆီသို့မဟုတ်ဆီနှင့်အတူအချို့သောသစ်သားမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် device ကိုကျန်ရစ်အမှတ်အသားများ။
အမှတ် Pad & Quill စပီကာပေါ်တွင်အခြေခံထားလိုသူများနှင့်မျက်နှာပြင်ကိုခြစ်ရာမကျသူများအတွက်၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပတ် ၀ န်းကျင်အကာအကွယ်ပေးရန်ဒေါ်လာ ၁၉.၉၅ ဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်။ အကယ်၍ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကတ်တလောက်တွင်ဤပစ္စည်းမျိုးကိုသင်တစ်ယောက်တည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ HomePod အတွက်, သို့သော်၎င်းသည်၎င်းကိုကြိုတင်ရောင်းချရန်အတွက်ပထမဆုံးစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » ပစ္စည်းများ » ဟုတ်ပါတယ်၊ HomePod ကစားပွဲကိုမခြစ်နိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာပထမဆုံး third-party အခြေစိုက်စခန်းများရှိပြီးဖြစ်သည်
'Close Your Rings' သည် Apple ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိကဏ္ new သစ်ဖြစ်ပြီးသင့်အား Apple Watch ကိုအသုံးပြုရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်